Home » Apụta » NAB NA-EKWU NDỊ BAỊBỤRỤ NDỊ KWESỊRỊ ỤBỌRỤ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ NA NKWUKWỤKWỌ NKWUKWỌ
Òtù Na-ahụ Maka Mgbasaozi Mba bụ ịnakwere akwụkwọ akwụkwọ iwu maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na Nkà na Ụzụ (BEITC) na 2019 họpụtara Gosi, bụ April 6-11 na Las Vegas.
A haziri Ụlọ Nzukọ Ịkụzi Ihe na Nkọwapụta Ihe ọmụma maka ndị ọrụ ntanetị na ndị ọrụ ntanetị, ndị ọrụ ntanetị, ndị na-emepụta ngwá ọrụ mgbasa ozi, ndị na-ekesa, ndị na-ahụ maka nkà na nkà, ndị R & D engineers, ndị ọkachamara IT na ndị ọkachamara na mgbasa ozi yiri nke a. Nzukọ a na-akọwa akwụkwọ nyocha na-ekwu maka ohere na ihe ịma aka ndị ọhụrụ na-eche ndị ọrụ ntanetị mgbasa ozi na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ụlọ ọrụ IT gburugburu ụwa.
họpụtara Gosi na-achọ ndị na-enye echiche ọhụrụ na echiche pụrụ iche na usoro ndị dị mkpa na teknụzụ na-ebu ọdịnihu nke redio, telivishọn na isiokwu mgbasa ozi-nkà na ụzụ. A ga-achọ iwu niile gbasara akwụkwọ iji gụnye nhọrọ nke isiokwu otu mmasị nke edepụtara na 2019 BEITC Kpọọ maka akwụkwọ.
A na-atụle nyocha ndị ọzọ na nyocha nke ndị ọgbọ, na akwụkwọ ndị teknụzụ na-egosipụta nchọpụta mbụ ma ọ bụ ndị ọkà okwu a ma ama nke ọma na-echebara echiche ọma. Enwere ike ịnye ọdịnaya niile dị na nkuzi nkuzi, na-abụghị nkwalite. A gaghị anabata nkwenye ndị na-akwado ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie na a pụrụ ịtụle atụmatụ ndị na-akọwa teknụzụ ndị dị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mgbasa ozi.
Oge imechi maka akwụkwọ akwụkwọ bụ October 26, 2018. A ga-ezite ndị edemede nke edere maka itinye na 2019 BEITC na November 2018. Pịa Ebe a maka ozi ndị ọzọ ma nyefee ndụmọdụ.
Banyere họpụtara Gosi
họpụtara Gosi, nke a na-eme April 6 - 11, 2019, na Las Vegas, NV, USA, bụ mgbakọ kasị ukwuu n'ụwa na nke kachasị mbara na-agụnye njikọta nke mgbasa ozi, ntụrụndụ na teknụzụ. N'ihe fọrọ nke nta ka ndị 100,000 bịara si na 165 mba na ndị na-egosi 1,700, họpụtara Gosi bụ ebe ahịa kasịnụ maka ihe ngwọta nke na-agafe mgbasa ozi nke mgbasa ozi ma na-eme ka akụ na ụba akụkọ akụkọ. Site na okike ruo oriri, n'ofe ọtụtụ nyiwe na ọtụtụ mba, họpụtara Gosi bụ ebe zuru ụwa ọnụ ọhụụ ikpokota wetara content ndụ ọhụrụ na-akpali akpali ụzọ.
2016 họpụtara Gosi 2016 họpụtara Gosi Job Fair 2016 họpụtara Gosi News Broadcast Naa Awards Broadcast Naa Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcasters Convention Broadcasting Convention họpụtara 2015 họpụtara 2016 họpụtara Gosi Họpụtara Gosi 2016 họpụtara show ọrụ Họpụtara Gosi Las Vegas Họpụtara Gosi Registration NAB16 nabshow National Association of Broadcasters Gosi Post Production World	2018-10-30
Previous: Kọmputa Engineer Engineering
Osote: AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ AKWỤKWỌ NDỊ DỊ N'ỤLỌ NCHE AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤ NA 2019 NAB SHOW